Philips Viva Collection Kettle HD9355/92 ~ ICT.com.mm
HomePhilips Viva Collection Kettle HD9355/92
Durable kettle in safe, food-grade full stainless steel for long and reliable daily use – withaconvenient Keep Warm mode that’s always ready to serve. Philips brings 60 years of trust... [Learn more]
Brand: PHILIPSSKU: 71204N/ASee more: Benchtop Appliances, Lifestyle, New Arrivals, Philips, Products, ShopFilter by: Kettles
Durable kettle in safe, food-grade full stainless steel for long and reliable daily use – withaconvenient Keep Warm mode that’s always ready to serve. Philips brings 60 years of trust and expertise to this elegant long-life kettle.
အစားအစာ Food Grade အဆင့်ရှိ Stainless စတီးလ် ကိုယ်ထည်နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ နာမည်ကျော် Philips အမှတ်တံဆိပ် လျှပ်စစ် ရေနွေးအိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုမီးဖိုချောင်မျိုးနဲ့မဆို ကိုက်ညီအောင် ပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ ပါဝါကြိုးကို ရေနွေးအိုးရဲ့အောက်ခြေမှာ ထည့်သွင်းသိမ်းဆည်းနိုင်တာကြောင့် အသုံးပြုပြီးတဲ့အချိန်မှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။ အိုးနဲ့ အောက်ခြေအထိုင်ကို အသေချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိဘဲ 360° လှည့်ပတ်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားတာကြောင့် အလွယ်တကူ တပ်ဆင်/ဖြုတ်ယူ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ထပ်ပိုးအလွှာအုပ်ထားတဲ့ အရည်အသွေးမြင့် Stainless Steel အသုံးပြု အပူပေးကိရိယာကြောင့် အချိန်တိုအတွင်း ရေဆူပြီး အလွယ်တကူနဲ့ သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုရာမှာ ဘေးကင်းလုံခြုံဖို့ကို အထူးဂရုပြုထားပြီး ရေဆူတဲ့အချိန်၊ အောက်ခြေအထိုင်ကနေ ဖြုတ်ယူတဲ့အချိန်နဲ့ အိုးအတွင်းမှာ ရေအနည်းငယ်လေးပဲ ကျန်ရှိတော့တဲ့အချိန်တွေမှာ ရေနွေးအိုးရဲ့ ပါဝါကို အလိုအလျောက် ပိတ်ချပေးမှာ ဖြစ်တာကြောင့် မီးဘေးအန္တရာယ်အတွက် အထူးစိတ်ချရစေပါတယ်။ အိုးအဖုံးကို ဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက် ခလုတ်ငယ်တစ်ခုကို ထည့်သွင်းပေးထားတာကြောင့် ရေနွေးငွေ့ အပူမလောင်စေဘဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ရေနွေးအိုးအဝကို ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း ပြုလုပ်ပေးထားတာကြောင့် အလွယ်တကူ အတွင်းပိုင်းသန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အသွေးမြင့် စတီးလ် ကိုယ်ထည်နဲ့ပြုလုပ်ထားပြီး Keep Warm Mode ပါဝင်တဲ့အတွက် ရေနွေးအပူချိန်ကို အမြဲတမ်း ထိန်းသိမ်းထားပေးနိုင်ပါတယ်။ မိသားစုတိုင်းအတွက် ဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချရပြီး ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ လျှပ်စစ်ရေနွေးအိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အာမခံသက်တမ်း နှစ်နှစ် ပါဝင်ပါတယ်။
The cord can be wrapped underneath the base, so it's the right length for any kitchen and easily stored away.
Total price:K172,000 K158,200
This item: Philips Viva Collection Kettle HD9355/92 K115,000